Iyo iPhone 7 ndiyo yekumusoro-kumagumo ine yakanyanya kuzvitonga, maererano Ndeipi? | IPhone nhau
Iyo iPhone 7 ndiyo yekumusoro-kumagumo ine yakanyanya kuzvitonga, maererano Ndeipi?
Segore rega rega, Apple inova nechokwadi chekuti iyo iPhone 7 ndiyo yakanakisa iPhone yavakamboburitsa - zvinopesana zvinogona kushamisa - asi zvinogona kunge zvisina kunaka munzvimbo dzese. Pakati Ndeipi? yaita imwe yemayedzo mazhinji anoitwa pese panotangwa smartphone nyowani uye, sekudzidza kwavo, iyo kuzvimiririra kweiyo iPhone 7 kwakanyanya kwazvo uchienzaniswa nemamwe makwikwi emakwikwi.
Kunyangwe vezvenhau veBritish vachisimbisa kuti kuzvimiririra kweiyo iPhone 7 kwakafanana neyawo mamwe majaira ane bhatiri rakaenzana saizi, chokwadi ndechekuti zvimwe zviteshi seHTC 10, iyo Samsung Galaxy S7 kana iyo LG G5 dzinogara kwenguva refu pasina kufanira kubatanidza kune chiteshi chemagetsi kuti uwedzere mafuta. Nemhedzisiro iyi, zvinoita sekunge iyo iPhone 7 haisi iyo foni yakarotwa nevashandisi vanoda yakawanda kuzvitonga.
Bhatiri rinogona kunge riri Achilles chitsitsinho cheiyo iPhone 7
Kunyangwe ichokwadi kuti mukushandisa kweInternet ne3G hakuna mutsauko wakanyanya, mu mafoni akaitwa pamusoro pe3G hongu iripo. Iyo Galaxy S7, yechitatu pachikuva ichi, inokwanisa 3G kudana zvakapetwa kaviri zvakapetwa seiyo iPhone 7, iri kuda kuzotaurwa.
Kutaura chokwadi, uye kunyangwe ini ndisingabvunze kuti Ndeupi? Muedzo, ruzivo rwakadai sekuzvimiririra kana uchiona mavhidhiyo, kuteerera mimhanzi, nezvimwe zvakadaro zvinoshaikwa. Mumuedzo uyu Ivo vashandisa yavo yega simulator, ivo vakaisa kupenya kune imwecheteyo nhanho pane ese madhizaini uye vakaita 100% mutoro kwavakawedzera imwe nguva yakati wandei, pamwe hafu yeawa yekuwedzera inokurudzirwa nezvimwe zvikumbiro.
Kunyangwe ini ndichiomerera kuti ini handina chokwadi chekuti iyo iPhone 7 haina kunakirwa sekuzvimiririra kwakanaka semamwe matemu emakwikwi, zvinoitawo sekukosha kutaura izvozvo chimwe chinhu chiri kuitika neIOS 10 chinokonzeresa bhatiri "kunwa". Yangu ichangotengeswa iPhone 6s yakaonawo kuzvimiririra kwayo plummet kubva pandakaisa iOS 10, zvinoratidza kuti kune mamwe matambudziko anogona kugadziriswa mune ramangwana kugadzirisa.
Chero zvazviri, uku ndiko kudzidza kweIpi? uye zvinoratidza kuti Apple yakamirira nyaya ndeye kuzvimiririra. Richauya gore rinouya richagadziriswa nezvakatarisirwa OLED kuratidza yegore rechigumi iPhone?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 ndiyo yekumusoro-kumagumo ine yakanyanya kuzvitonga, maererano Ndeipi?
Waizviziva here kuti iyo iPhone inonyora mafambiro ako ese? Maitiro ekuzvidzivirira
Uye iyi vhidhiyo yechipiri ye14 ndiyo yakatanga iyo Hissgate